Huawei Nova 6 waxaa la soo bandhigi doonaa Diseembar 5 | Androidsis
Huawei Nova 6 horeyba waxay u leedahay taariikh soo bandhigid ah
Eder Ferreno | | Huawei, Mobiles
Nooca Huawei ee Nova wuxuu leeyahay dhowr taleefan sanadkan, Nova 5z kii ugu dambeeyay ee iyaga ka mid ah. Waxaa la filayaa in ka hor dhamaadka sanadkan qaab cusub uu ku imaan doono taleefanadan kala duwan. Qalabkani wuxuu noqon lahaa Huawei Nova 6, oo ay hore u jirtay dillaacyo kala duwan mug sare dhawaan. Taariikhda gudbintaada waa la xaqiijiyay.
Sida toddobaadyadan la isla dhexmarayay, Huawei Nova 6 ayaa la soo bandhigayaa ka hor dhammaadka sanadka. Kala duwanaanshahani wuxuu helay tixgelin gaar ah oo ku dhex jirta buugga shirkadda ee 2019, markii la arkay taleefannada tirada badan ee lagu soo bandhigay. Kahor dhamaadka sanadka waxay nooga tagayaan mid kale.
Waxay noqon doontaa 5-ta Diseembar marka la soo bandhigo the Huawei Nova 6. Soo bandhigid dhowr toddobaad gudahood ah, taas oo lagula kulmayo xubinta ugu cusub ee noocyadan. Su’aasha ku saabsan aaladani waxay tahay ma noqon doontaa telefoonka leh 5G kaas oo laga hadlay toddobaadyo ka hor ama haddii ay noqon doonto moodel ka duwan.
Telefoonku wuxuu adeegsan lahaa processor sare, sida Kirin 990. Processor-kan ayaa la socda nooc leh 5GSidaa darteed, ma ahan wax la yaab leh in laga fekero in qalabkani uu yeelan doono 5G. Intaa waxaa dheer, shabakadaha 5G ayaa horeyba loo geeyay Shiinaha iyo noocyo badan oo ka mid ah ayaa bilaabaya taleefannada 5G.
Huawei Nova 6 sidoo kale wuxuu ku imaan lahaa midabbo kala duwan, illaa iyo hadda waa la xaqiijiyay midab guduud, madow, buluug iyo casaan ah. Illaa iyo hadda kaliya taleefanka lagu soo bandhigi karo Shiinaha ayaa la xaqiijiyay. Waxay umuuqataa inay imaaneyso iyadoon adeegyo iyo codsiyo Google laheen, taas oo adkayn doonta bilaabitaankeeda caalamiga
5-ka Diseembar Waxaan ka ogaan karnaa wax walba oo ku saabsan Huawei Nova 6. Waxay u badan tahay in soo bandhigidani ay jirto markii xog laga helayo soo bandhigida caalamiga ah, haddii ay ku dhammaato inay dhacdo, ee taleefankan dhamaadka sare ee ka imanaya astaanta Shiinaha. Bilaabid xiiso weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei Nova 6 horeyba waxay u leedahay taariikh soo bandhigid ah
Maxamed tribak dijo
Salaan waan rabaa ama fadlan
Jawaab maxamed tribak
Xiaomi waxay xaqiijineysaa in barnaamijyada degdegga ahi ay yihiin barnaamij gebi ahaanba badbaado leh oo ka dhan ah xannibaadda Google Play Protect
Android 10 beta oo loogu talagalay Samsung's Note 9 iyo S9 si loo bilaabo toddobaadkan